Akwụkwọ nke Zara Ziad na Martech Zone |
Edemede site na Zara Ziad
Ọdịmma data adịghị mma bụ nchegbu na-arị elu maka ọtụtụ ndị isi azụmaahịa ka ha na-emezughị ebumnuche ha ezubere iche. Otu ndị na-enyocha data - nke kwesịrị ịmepụta ihe ọmụma data a pụrụ ịdabere na ya - na-etinye 80% nke oge ha ihicha na ịkwadebe data, na naanị 20% nke oge fọdụrụ iji mee nyocha ahụ n'ezie. Nke a nwere mmetụta dị ukwuu na otu arụpụtaghị ihe dị ka ha ga-eji aka kwado njirimara data nke
Mọnde, Jenụwarị 24, 2022 Mọnde, Jenụwarị 24, 2022 Zara Ziad
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ere ahịa B2B - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 27% - kwetara na ezughị ezu data furu ha 10%, ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ, ọbụna karịa na mfu ego ha nwetara kwa afọ. Nke a na-egosipụta n'ụzọ doro anya okwu dị mkpa nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa chere ihu taa, ya bụ: adịghị mma data. Data ezughi oke, efu, ma ọ bụ adịghị mma nwere ike inwe nnukwu mmetụta na ọganiihu nke usoro ịzụ ahịa gị. Nke a na-eme ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta niile ngalaba Filiks na a ụlọ ọrụ – ma kpọmkwem ahịa
Ike nke data: Otu ndị otu na-edu ndú si enweta data dị ka uru asọmpi
Na Mọnde, Nọmba 16, 2021 Na Mọnde, Nọmba 16, 2021 Zara Ziad
Data bụ isi iyi ugbu a na ọdịnihu nke uru asọmpi. Borja Gonzáles del Regueral - Vice Dean, IE University's School of Human Sciences and Technology Business ndú ghọtara kpamkpam mkpa data dị ka isi ihe bara uru maka ọganihu azụmahịa ha. Ọ bụ ezie na ọtụtụ achọpụtala mkpa ọ dị, ọtụtụ n'ime ha ka na-agbasi mbọ ike ịghọta ka enwere ike iji ya nweta nsonaazụ azụmaahịa ka mma, dị ka ịtụgharị ọtụtụ atụmanya ka ọ bụrụ ndị ahịa, ịkwalite aha ika, ma ọ bụ